Oku olu ruru Slack | Gam akporosis
Slack, Ekwuru m banyere oge na-adịbeghị anya na omimi, bụ sọftụwia ebumnuche iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ na otu ọrụ nke nwere otutu omume oma doro anya. Na ahịa sọftụwia siri ike nke anyị hụrụ onwe anyị ugbu a, ọ nweela ike ịgbagha site na nnukwu atụmatụ nke ejirila ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa.
Ugbu a, Slack ekwuputala na njirimara ọkpụkpọ olu maka ọrụ nkwukọrịta otu ya, nke dị na beta nyocha kemgbe ọnwa, nwere malitere itinye ya na nke ikpeazụ. Ikike ohuru nke ịchọrọ ime ka ọ sie ike maka ọrụ ndị ọzọ akọwapụtara nke ọma na oku dịka Skype ma ọ bụ Hangouts.
Na desktọọpụ version nke slack, na ma Windows na Mac, ọhụrụ ọkpụkpọ atụmatụ bụ dị site na ịpị akara ngosi ekwentị n’elu aka nri nke nkụnye eji isi mee. Iji mee otu ihe ahụ na ngwa mkpanaka, enwere ike ịnweta ya site na ịpị nhọrọ "Malite oku" na ntanetị ngwa ma ọ bụ site na menu mmapụta mmapụta ozi.
Maka oku otu, dị maka naanị ndị akwụ ụgwọ, mgbe ebidoro otu, ị ga-enweta ozi na-akpọ gị ka ị sonye na ya, nke ga-azọpụta gị ịhapụ igbu oge site na usoro ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. Offọdụ nkọwa nke olu oku na Slack gụnyere azịza na emojis nke ahụ na-enye gị ohere ịhọrọ otu ma gosipụta ya na avatar, n'ụzọ dị otú a na-egosipụta mmetụta na-enweghị ịkwụsịtụ ọkà okwu.
Slack, dị ka nke a, na-atụ aro atụmatụ ndị ọzọ a na-eduzi ya gaa na ebumnuche ka ukwuu nke ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụ dị mkpa iji nweta ọrụ ndị ọzọ iji nweta ọtụtụ ọrụ ndị ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Oku olu bụ ihe ọhụrụ na Slack